सीके राउत भन्छन् – प्रवचन दिइराख्नु पर्दैन, गाडी ज'लाइन्छ !
सीके राउत भन्छन् – प्रवचन दिइराख्नु पर्दैन, गाडी ज’लाइन्छ !
सिरहा – किसानको पक्षमा भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको जनमत पार्टीको यतिबेला चौतर्फी आ’लो’चना भइरहेको छ ।
आइतबार आमह’डतालका दौरान सिरहामा सर्वसाधारणका गाडीमाथि तो’डफो’ड गरेको भन्दै सीके राउत नेतृत्वको पार्टीको आ’लो’चना भइरहेको हो ।
आलोचनाबारे जवाफ दिँदै राउतले आन्दोलनको उल्ल;ङ्घन गर्नेलाई कारबाही हुने प्रष्ट पारेका छन् । कसैले किसानहरुलाई आन्दोलनबारे प्रवचन नदिनसमेत सुझाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यहाँको स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको हो । जसले जबरजस्ती हाम्रो आन्दोलन उल्ल’ङ्घन गर्न लगाए, बिहानैबिहान दर्जनौँ राउन्ड अश्रुग्याँस फा’यरिङ गरे र दर्जनौँ प्रहरीले घेरेर निहत्था निर्दोष जनतालाई मरणा;सन्न गरी कु’टे। गाडी चलाएर आन्दोलन उल्ल’ङ्घन गर्ने र दादा’गिरी देखाउने हो भने कार’बा’ही हुन्छ नै।’
यस्तो छ राउतको भनाइ : सिरहामा आम’हड्तालको औपचारिक घोषणा दुई दिन पहिलेदेखि थियो। एक दिन अगाडि म’साल जु’लु’स पनि निकालिएको थियो। आम हड’तालको दिन सिरहा जिल्ला प्रवेश गर्नु अगाडि नै बन्दीपुर र बलानमा सबै गाडीलाई अगाडि बन्द छ भनेर सूचना पनि दिइन्थ्यो।
यति हुँदाहुँदै पनि गाडी चलाएर आन्दोलन उल्ल’ङ्घन गर्ने र दादा’गिरी देखाउने हो भने कार’बा’ही हुन्छ नै। मारुती सिमेन्टको ट्रक चलाउनु कुनै अत्यावश्यक साधन भित्र पर्दैन।
क्षति’पूर्तिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यहाँको स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको हो, जसले जबरजस्ती हाम्रो आन्दोलन उल्ल’ङ्घन गर्न लगाए, बिहानैबिहान दर्जनौँ राउन्ड अश्रु’ग्याँस फाय;रिङ गरे र दर्जनौँ प्रहरीले घेरेर निह’त्था नि;र्दोष जनतालाई मरणा;सन्न गरी कु;टे।
कसैले प्रवचन दिइराख्नु पर्दैन – तो’प प’ड्का;एर हजारौँ मान्छे मा;र्ने र प्लेन अपह;रण गर्ने, टाउको का’;ट्दै हिँड्ने, १७,००० मा-र्ने, ५ महिना नाका बन्दी गरेर पूरा मधेस तहस’न’हस बनाउने, दर्जनका दर्जन गाडीमा आ;गो लगाउने, गौर नर सं’हार गरी २७ जनाको निर्म;म ह-त्या गर्ने, नाका’ब’न्दीमा आफू तेल बेच्ने र जनताले तेल ल्याउँदा जिउँदै मान्छेलाई पेट्रोल छ’रेर आ;गो लगाएर मा;र्ने, प्रहरीलाई एम्बु-लेन्सबाट थुतेर ह-त्या गर्ने, दर्जनौँ प्रहरी चौकीमा आ;गो लगाउनेहरूले किसानहरूलाई प्रवचन दिइराख्नु पर्दैन।